Socdaalkii Garyare iyo Gobalka Shabeeladda Hoose.
W/Qorey: AbdiWali Ibraahim Aden “Garyare”
Waxay ahayd Barqanimo Maalin Sabti ah markii aan ka baxay Magaaladda Muqdisho, Saacaddu waxay ahayd Abaaro 5:30 Daqiiqo. Waxay ahayd Maalin Ciid ah oo ay Dadka oo dhan damaashaadayeen. Waxaan ka billaabay Socodkayga Magaaladda Muqdisho. Iyadoo aan ku sii hakaday Degmadda Afgooye ah oo ah Xuduuda Gobaladda Banaadir iyo Shabeeladda Hoose.
Intii aan ku sii jiray wadada Afgooye waxaan ku sii arkay Isbaarooyin dhawr ah oo wadada u yaalay Maleeshiyooyin Hubaysan oo aan cidna ka amar qaadan. Kuwaasoo Lacago baad ah ka qaado Gawaaridda Dadwaynaha. Waxaan Naxdin iyo wax xoogaa Cabsi ah ku sii maro wadada waxaan ugu dambayntii gaaray Koontoroolka Degmadda Afgooye oo ah Isbaaradda ugu dambaysa ee Maleeshiyooyin Beeleedyadda aan cidna ka amar qaadan.
Intii aan joogay Afgooye waxyaabihii iigu yaabka badnaa ee aan ku arkay waxaa ka mid ahaa Dadka oo dhamaantood wada dacas la’aan ahaa. Iyadoo sababta arrintaasna aan u arkay Dhiiqada badan ee Magaaladda ku teedsanayd. Waxayna ahayd Maalin Roob iyo Iid Wadaagsatay.
Ma ahayn wax ceeb iyo argagax la leh Dadka Reer Afgooye ah inay Kabo la’aan ku dhex maraan Magaaladda. Laakiin waxay yaab ka muujinayeen markii ay arkeen anigoo oo kabahaygii gashan. Waxaana halkii aan la yaabi lahaa ay igu billaabeen inay I waydiiyaan su’aalo ku saabsan sababta aan kabaha isaga siibi waayay.
Indhahaygu waxay sidoo kale qabanayeen Dadka oo Waayeel iyo Da’yarba wata Ulo dhaadheer oo sida la ii sheegay qofka ka caawinaya inuusan ku kufin dhiiqadda. Laakiin aniga dhamaan dhaqamadaasi waxay ahaayeen kuwo aniga igu cusub, inkastoo aysan ahayn markii ugu horaysay ee aan taggo Gobalka Shabeeladda Hoose. Laakiin Jawiga oo isbadalay markan ayaa badalay Muuqaalkii hore ee aan ka haystay Gobalka Shabeeladda Hoose.
Degmadda Afgooye markii aan ka gudbay waxaan intii aan jidka ku sii jiray arkayay Dad Reer Guuraa ah oo wadada qarkeeda xoolo ku raacanaya. Inkastoo Xoolo dhaqashadda aysan caan ku ahayn Gobalka Shabeeladda Hoose, haddana waxaa jira dad xoolo ku dhaqda Gobalkaasi, waxaan dareemayay wax xoogaa Doog iyo Caws ah inuu ka soo iftiimiyay Hareeraha Wadada, kadib markii ay Raxmaddii Eebe ku hoortay Gobalka Shabeeladda Hoose.
Waddada Waxyaabihii iigu yaabka badnaa ee aan ku arkay waxaa ka mid ahaa Daanyeero faro badan oo safan wadadan. Kuwaasoo ay Saaxiibadayda Safarka igu wehliyay ii sheegeen inay sugayaan Gawaaridda Mooska. Waxaana ay igula kaftameen waa Isbaariistayaasha Duur Joogta.
Ammaanka Wadada waxa uu ahaa mid hagaagsan. Waxaana Marka illaa iyo Afgooye aan ku arkay Labo Isbaaro oo kaliya kuwaasoo hoos tagga Maamulka Gobalka Shabeeladda Hoose. Waxaana Isbaarooyinkaasi ay u dhaqmayeen Maamulayaashooda sidii ay u dhaqmaan "Check Points"-ka meelaha uu Maamulku ka jiro.
Markii aan galay Gudaha Marka waxaan ku arkay in isbadal wayn oo ku yimid hab maamulka iyo Ammaanka Magaaladaasi. Waxaanan dareemayay in Magaaladdu ay noqotay goob uu ka jiro Maamul hagaagsan. Waxaan soo xusuustay Warbixin uu horay Saaxiibkeey C/casiis Maxamuud Guuleed Afrika Gobalka uga qoray.iyadoo warbixintii C/casiis ay gabi ahaanba iiga muuqan waysay arimihii uu inta badan ka qoray Maamulka iyo guud ahaan Gobolka sida uu yahay.
Maalmo kadib markii aan dhex galay Magaalada Marka isla markaana aan waxbadan ka ogaaday Xaalada guud ee Gobolka ayaan waxaa qadka Teleefoonka kula soo xiriiray Saaxiibkey C/Casiis Afrika oo aan wax ka weydiiyay halka uu ka soo xigtay qoraalkii uu ka qoray Gobolka iyo hadda waxa uu kala socdo jawiga guud ee Gobolka,waxaa uu iisheegay in uu aad ula socdo xaalada guud Gobolka,Laakiin laf ahaantiisa C/casiis oo dhawaan isna tagay Gobalka waxa uu ka marag kacay in Gobalka isbadal wayn oo dhinacyadda Ammaanka, Caafimaadka, Dhaqaalaha, iyo Maamulka uu ku yimid.
Magaaladda Marka waxyaabaha aan ku arkay waxaa ka mid ahaa in Goobihii Gaadiidka Sharci Daradda ah la dhigi jiray laga mamnuucay. Isla markaana gaadiidka lagu celiyay Boosteejadoodii hore. Waxaana gaarigii si sharci darro ah jidka loo dhigo laga qaadayay Tallaabo dhinaca Sharciga ah.
Xarunta Maamulka oo aan tagay waxay ahayd mid ay ka socotay Shaqo xoogan waxayna hawl wadeenadda Xaruntu ku mashquulsanaayeen kala qaabiladda dadka Xarunta soo booqanaya. Iyagoo is badal wayn ku sameeyay Dhaliilihii hore ee uu ku soo arkay Wariyihii igu horeeyay ee Gobalkaasi tagay.
Guddoomiye Ku Xigeenka Gobalka Shabeeladda Hoose, Maxamed Xaaji Cali Baaboow oo aan Xarunta Gobalka kula kulmay ayaa waraysi aan la yeeshay waxa uu sharaxaad iiga bixiyay Horumarka uu Gobalku sameeyay. Waxaana uu sheegay in Gobalku uu haatan ka mid yahay meelaha ugu nabdoon Somalia.
Mar aan hor dhigay su’aal la xiriirtay waxa ka jira in Dad Beero Xoog looga haysto waxa uu ii sheegay inaysan arrintaasi waxba ka jirin. Isla markaana ciddii Maamulka u soo gudbisa in lagu xadgudbay ay Maxkamadda Gobalka wax ka qabato. Wuxuuse sheegay inay jiraan Dad warar been abuur faafiyaan.
Arintan ayaa waxaa ay ahayd mid inbadan ku soo noq noqotay Saxaafadda Magaalada Muqdisho,iyadoo ay jireen qaarka mid ah Dadka Gobolkaasi dega oo saxaafadda soo gaarsiiyay qoraalo ay kaga cabanayaan Dhul-beereedyo xoog looga haysto,waxaana haba yaraatee waayay intii aan Gobolka ku sugnaa dad iisheega inay jiraan wax dhul ah oo xoog looga haysto marka laga soo tago qolyaha saxaafadda Muqdisho inta badan u soo gudbiya eedeeymahaasi.
Dhinaca kale mar aan Baaboow waydiiyay Waqtiga uu dhamaanayo ka talinta Gobolkaasi Maamulka uu isagu ka mid ka yahay waxa uu sheegay in Waqtiga Jiritaanka Maamulkooda uu ku xiran yahay Rabitaanka Dadka u dhashay Gobalka. Waxaana uu ku dooday in markii horaba uu Maamulkoodu ku yimid Rabitaanka dadka u dhashay Gobalka.
Waxaa Gobolka intii aan joogay ka maqnaa Guddoomiyaha Maamulka Gobolka Shabeelaha Hoose Sheekh Yuusuf Maxamed Siyaad indha-cadde,iyadoo aan ka maqnaashihiisa wax ka waydiiyay Xoghayaha warfaafinta Maamulka Gobolkaasi Cali baashi Jimcaale abtidoon oo ii sheegay in howlo Maamul uu ugu maqan yahay Magaalada Muqdisho,hase ahaatee arintaasi Cali Baashi igama siin faahfaahsan dheeri ah oo la xiriirta socdaalka Guddoomiya Gobolka.
Cali Baashi ayaa intii aan ku sugnaa Gobolka waxaa uu xooga saarayay sidii kor loogu qaadi lahaa xoriyada Saxaafadda Madaxa banana ee ka howlgasha Gobolka Shabeelaha Hoose,iyadoo ay taasi jirto hadana Warbaahinta Madaxa banana ee ka howl gasha Gobolkaasi waxaa ay wali tabanayeen tacadiyo loo gaystay Wariyayaashooda.
Mar aan ka qeyb galay Shir jaraa’id oo uu qabtay Guddoomiye ku xigeenka Gobolka Shabeelaha Hoose Maxamed Xaaji Cali Baabow ayaa gabagabdisii lagu soo qaatay in maalintaasi wixii ka danbeeya aan lagu xadgudbi doonin Saxaafadda Gobolka iyo guud ahaan tan Soomaaliya,laakiin aniga oo ka mid ahaa Wariyayaashii ka soo qeyb galay Shirkaasi jaraa’id ayaan waxaan waydiiyay intii nagala joogtay Maamulka Gobolka oo uu ka mid ahaa Baabow,Cali Bashi iyo Nuuriye oo ka mid ah Saraakiisha Ciidamada Maamulka Gobolka Shabeelaha hoose bal inay iiga waramaan hadalkaasi ka soo yeeray inuu yahay mid ku siman afka oo kaliya iyo inuu yahay mid laga dhabeen doono,Waxaana ay iisheegeen inay markan ka tahay dhab inay si wanaag ku dheehan yahay ula dhaqmi doonaan Wariyayaasha Gobolka iyo kuwa kaleba.
Magaaladda Marka waxaa ka jira Hal Isbitaal oo ay gacanta ku hayaan Guddi laga soo dhex doortay Dadwaynaha Gobalka. Waxaana Guddigaasi oo lagu magacaabo Guddiga Taakulaynta Isbitaalka Marka ay Dhaqaalaha lagu socodsiiyo Isbitaalka ka soo ururiyaan qaybaha Bulshadda ee Gobalka iyo Maamulka Gobolka Shabeelaha Hoose oo bishii ugu deeqa Isbitaalka deeq lacageed oo dhan Toban milyan oo shilin Soomaali ah sida ay ii xaqiijiyeen Guddiga gacanta ku haya Howlaha isbitaalka iyo Maamulka Gobolka.
Dhinaca Waxbarashadda Gobalka waxaa ka furan Dugsiyo Waxbarasho oo gaarsiisaan illaa iyo Waxbarashadda Sare. Waxaana I cajab galiyay in dhamaan waxbarashadda hoose iyo sare ay Muqdisho uga duwan tahay Marko inaan Ardayga wax lacag laga qaadayn.
Waxaana Magaaladda ka furan inta badan Dugsiyo ay maalgaliyaan Hay’adaha ay ka mid yihiin COSV iyo New Way oo ay Maamuli jirtay Hawenaydii dhimatay ee Varrena Career oo lagu dilay Gudaha Marka.
Hay’adda COSV oo ka mid ah hay’adaha ugu dhaq dhaqaaqa badan Magaaladda ayaa Gobalka intii aan joogay waxaan dareemayay inay barnaamijyo badan oo horumarineed ka waddo. Waxaana Masuuliyiinta Hay’adaasi aan marar badan ku arkay iyagoo booqanaya Isbitaalka Marka.
Maxamed Daahir Guuleed oo ka mida Saraakiisha Hay’adda COSV ayaa ka mid ahaa dadkii aan ku arkay iyagoo kaalin fir fircoon ka qaadanaya taakulaynta Isbitaalka Marka. Waxaana dadaalka Masuuliyiintan qiray Maamulka Isbitaalka gacanta ku haya oo ugu horeeyo Guddoomiyaha Guddiga Taakulaynta Isbitaalka, Shiiq Xasan Macallin Maxamed “Shiiq Xasan Jiis”
Intii aan joogay Magaalada Marka waxaan sidoo kale aan booqday Xarunta Maxkamada Degmada Marka iyo Xabsiga dhexe,iyadoo aan halkaasi kula kulmay Guddoomiyaha Maxkamada Degmada Marka Dr,Jeylaani Qaali Huurshe oo aan ka xog areeystay arinta Maxkamada iyo guud ahaan howlaha garsoorka,waxaana uu tibaaxay inay howlaha garsoorka ku socdaan sidii loogu talagalay.
Dr,Jeylaani Qaali Huurshe oo aan wax ka weydiiyay arintii dhexmartay isaga iyo Maamulka Gobolka Shabeelaha Hoose uu uu Madaxka ka yahay Yuusuf Maxamed Siyaad Indha-cadde ayaa waxaa uu iisheegay in arintaasi ahayd mid lagu fududaaday oo uu ku qaldamay Maamulka Gobolka,laakiin waxaa uu iska fogeeyay dhamaan wixii isaga xilligii arintasi socotay lagu soo eedeeyay oo uu sheegay inay ahaayeen waxa uu ugu yeeray owr ku kacsi uu sameeynayay Maamulka Gobolkaasi ka taliya.
Intii aan ku guda jiray Socdaalka aan ku marayay qeybo badan oo ka mid ah Gobolka Shabeelaha Hoose waxaan isku dayay bal in aan wax ka ogaado wax qabadka Ururo inta badan ay saxaafada ka hadasho oo la yeeshay inay wax ka qabtaan arimaha Gobolka,inta badan Ururadii aan isku day in aan waraysi la soo yeesho waa ay ka meer meereen arintaasi.
Laakiin ugu danbeeyntii Waxay la kulmay Xaliimo Cabdi Caruush oo ah Guddoomiyaha Ururka Horumarinta haweenka IIDA ee Xaruntiisu tahay Magaalada Marka,waxay ahayd Barqanimo markii aan xarunta Ururka iida kuwada kulanay aniga iyo Xaliimo,waxaana inta badan aan ka xog wareeystay bal inay ii sharaxdo waxa ay ka qabtaan Gobolka Shabeelaha hoose,waxayna inta badan ku dheeraatay ka hadalka waxa ay Umada Soomaaliyeed u qabteen gaar ahaan kuwa Gobolka Shabeelaha Hoose,iyadoo ciddii wareysigaasi rabta inay akhrisata inay Website-ka ka heli karaan waraysiga oo dhameystiran .
Waxaa Magaalada xarun ku leh Laba Idaacadood oo kala ah Horn Afrik iyo Shabeele,kuwaasoo dadka gobolkaasi usoo gudbiya wararka Caalamka iyo barnaamijyo lagu banaarujinayo Dadka Gobolka sidii ay ula soo bixi lahaayeen kheyraadka uu ilaahay ku maneystay Gobolka Shabeelaha Hoose.
Maamulka idaacada horn afrik ee Xarunta Marka ayaa maalin isniin ah igu marti qaaday barnaamij loogu magacdaray Marka iyo maanta oo uu daadihiye ka yahay Maahir Jaamac Aadan oo ah Wariye in badan ka shaqeeyay Idaacadaha Magaalada Muqdisho isla markaana ka mid ah Mas’uuliyiinta Idaacadaasi Horn Afrik ee Marka,iyadoo inta badan uu Maahir Jaamac Aadan iga xog wareeystay socdaalkeyga Gobolka Shabeelaha Hoose oo aan markasi ku jiray Maalintiisii 3-aad iyo wax yaabihii aan ku arkay Gobolka intii aan joogay,waxaana aan inta badan halkaasi ku soo bandhigay socdaalkeyga Gobolka oo ahaa mid ay u jeedadiisu ahayd la kulan ka Madaxweynihii ugu horeeyay Soomaaliya Mudane ,Aadan C/lle Cismaan “Aaden Cadde” oo la iisheegay inuu ku sugan yahay meel aan sidaasi uga fogeeyn Deegaanka Janaale,hase ahaatee markii danbe la iishegay in loo soo qaaday Magaalada Muqdisho.,waxaana ay taasi sababtay in aan soo afmeero socdaalkii aan ku tagay Gobolka Shabeelaha Hoose.dibna aan ugu soo baqoolo Magaaladii aan markii hore ka bilaabay Socdaalkeyga ee Muqdisho.
Gobalka Shabeeladda Hoose waa Gobal Hodan ku ah Wax Soo Saarka Beeraha. Waana Gobalka Kaliya ee Somalia wadaaga Khayraadka Badda iyo Bariga. Iyadoo sidoo kale Gobalka Shabeeladda Hoose uu yahay Baaxad ahaan kan ugu wayn Somalia.
Gobalka Shabeeladda Hoose waxa uu ka kooban yahay Siddeed Degmo. Waxaana Gobalka uu caan ku yahay dhinacyadda Tacabka Beeraha iyo Kalluumaysiga. Iyadoo Gobalku uu si wayn ugu tiirsan yahay Tacabka Beeraha oo ah Il dhaqaale oo muhiim u ah Gobalka.
Guud ahaan Gobalka Shabeeladda Hoose ayaa ahaa mid ka duwan Muuqaalkii hore ee aan ku aqaanay waxaana Gobalka uu ahaa mid runtii safarkan si wayn iigu xiiso galiyay. Waxaanan soo xusuustay in Nabaddu ay tahay Furaha Nolasha marka loo eego Nabadda ka jirta Gobalka Shabeeladda Hoose.
W/Qorey,Abdi Wali Ibraahim Aden “Garyare”
Ururka Haweenka Somaliyeed ee Oslo oo Lagu Eedeeyay in ay u Shaqeeyaan Kaniisadaha
»Eedayntaas waxaa Soo jeediyeey Culimada Soomaaliyeed..
»Cudurada Duumada iyo Shuban oo fara ba'an Jubada Hoose